Tartan Isboorti Oo Ka Furmay Degmada Howlwadaag – Radio Muqdisho
Tartan Isboorti Oo Ka Furmay Degmada Howlwadaag
Munaasabadda oo lagu furayay tartan isboorti oo kor loogu qaadayo isdhexgalka Bulshada islamarkaana u dhexeeya kooxo ka kala socda Degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay Degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, iyadoo munaasabadaasi ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo dadweyne aad u fara badan oo u soo daawasho tagay ciyaartaasi.
Guddoomiyaha Isboortiga ee gobolka Banaadir Xasan Aadan Yabarow Wiish oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in la dhex dhigay degmooyinka gobolka Banaadir koob loogu magacdaray Nabad Dhoore oo ay ku tartamayaan ciyaartoy ka kala socota 17-degmo ee gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada gobolka Banaadir C/kaafi Maxamuud Makaraan oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in tartankani uu kaalin mugleh ka qaadan doono isdhexgalka bulshada.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir Axmed Nuur Cabdi Siyaad oo degmadiisu marti galineyso tartankaasi ciyaaraha ah ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in tartan uu ka furmo Howlwadaag.
intaasi kaddib ayaa ciyaartii ugu horeysay ee tartankaasi waxaa lagu furay kooxo ka kala socday degmooyinka Howlwadaag iyo Waaberi ee magaalada Muqdisho, iyadoo halkaasi labada koox ay ku soo bandhigeen ciyaar wanaag oo xiisa galisay daawadayaasha ciyaarta, waxaana ay ku soo dhamaatay 7-6 Gool oo ay guushu ku raacday Degmada Waaberi.
Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada oo ka da’ay Beledweyne Saameyna Ku Yeeshay Dadka